Madaxweynaha oo ruqseeyey darajadana ka xayuubiyey Cabdallah Cabdallah - Halbeeg News
Madaxweynaha oo ruqseeyey darajadana ka xayuubiyey Cabdallah Cabdallah
MUQDISHO (HALBEEG) – Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamad Cabdullaahi Farmajo ayaa darajada ciidan ka xayuubiyey, islamarkaana ka ruqseeyeye shaqada Hay’adda Sirdoonka iyo Nabadsugidda ee Qaranka (NISA), Sarreeye Guuto Cabdallah Cabdallah oo isagu horay usoo noqday Taliye Ku Xigeenka Koowaad ee NISA.
Qoraal kooban oo lasoo dhigay barta Twitter-ka ee Madaxtooyada Soomaaliya (Villa Somalia), waxaa lagu sheegay in Madaxweynuhu go’aankan gaaray kaddib soo jeedin uga timid Agaasimaha Hay’adda Sirdoonka iyo Nabadsugidda Qaranka Xuseen Cismaan Xuseen.
Madaxweynaha JFS Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka dhigay dhammaan darajooyinkii ciidan, kana ruqseeyay Hay'adda Nabad Sugidda & Sirdoonka Qaranka S/Guuto Cabdalla Cabdalla Maxamed keddib soojeedin ka timid Agaasimaha Guud ee Hay'adda Nabad Sugidda & Sirdoonka Qaranka.
— Villa Somalia (@TheVillaSomalia) September 8, 2018
Dhowaan ayey ahayd markii Hay’adda NISA sheegtay in Cabdallah Cabdallah uu yahay shaqsi aan lagu aamini karin xil qaran oo muhiim ah iyo weliba in aanu u qalmin kasii mid ahaanshaha hay’adda NISA.
Agaasimaha Hay’adda Sirdoonka iyo Nabadsugidda Qaranka Xuseen Cismaan Xuseen, ayaa July 16, 2018 shaqo joojin ku sameeyey Sarreeye Guuto Cabdallah Cabdallah Maxamad​ oo xilligaas ahaa taliye ku xigeenka ​koowaad ee NISA iyo Sarreeye Guuto Cabdiqaadir Maxamed Nuur oo isna ahaa taliye ku xigeenka labaad ee hay’adda.
​Bil kaddib oo ku aadaneyd August 16, 2018, wareegto kasoo ​baxday xafiiska Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa labadaas mas’uul xilalka looga xayuubiyey, iyadoo Taliye Ku Xigeenka Koowaad ee Hay’adda Sirdoonka iyo Nabadsugidda Qaranka loo soo magacaabay Fahad Yaasiin oo markaas isna ahaa Agaasimaha Guud ee Madaxtooyada Soomaaliya.